Real Madrid oo Kooxda Arsenal u sheegtay qiimaha ay ku iibsan karaan Dani Ceballos – Gool FM
(London) 29 Abril 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in loo sheegay inay ku qasban tahay in ay bixiso lacag dhan 44 milyan si ay si rasmi ah ula soo wareegaan Dani Ceballos kooxda Real Madrid.
23-sano jirkaan ayaa 24 kulan u saftay tartammada oo dhan kooxda Gunners intii lagu guda jiray xilliyadii amaahda uu kula joogay kooxda Arsenal xilli ciyaareedkan, laakiin mustaqbalka reer Spain ayaa weli cirka isku shareeraya xilli uu jiro faafaha Coronavirus.
Ceballos ayaa dhowaan qirtay inuusan la hadlin macallinka Los Blancos Zinedine Zidane tan iyo markii uu yimid garoonka Emirates, inkastoo kooxda La Liga ka dhisan ay u baahnaan doonto lacago aad u badan oo ku saabsan adeeggiisa.
Sida laga soo xigtay Jariiradda AS, Real Madrid ayaa diyaar u ah inay ku iibiso Ceballos lacag dhan 44 milyan gini, inkastoo weli la arki doono sida heshiiska suuqa kala iibsiga ay u saameyn doonto faafitaanka COVID-19.
Arsenal ayay u badan tahay inay si ba’an u saameeyaan xiisada taagan, iyadoo wararkii ugu dambeeyay ay soo jeedinayaan in Gunners ay lumin karto ilaa iyo 50 milyan gini oo dakhligeed ah haddii kulamada lagu ciyaaro taageero la’aan xili ciyaareedkan inta ka dhiman.
Ceballos heshiiska uu kula jooga kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa dhacaya xilli ciyaareedkan 2023-ka.
Kooxda West Ham United oo go’aan ka gaartay xiddigeeda Declan Rice oo bartilmaameed u ah Chelsea.. (Miyaa la siinayaa Blues?)